प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा खोप वितरण सुरु
८ सेकेण्ड अगाडि
ओलीको हत्या गर्नका लागि आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको भन्ने सांसद नरोत्तम वैद्य को हुन्? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
शनिवार, जेठ २९ २०७८
नेपाली कांग्रेसका बाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल क्रममा शुक्रबार भाग लिँदै कांग्रेस सांसद वैद्यले ओलीको हत्याका लागि आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
‘ओली यसरी आइरहेको छ कि आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ । यो समयमा खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है । त्यसैले मेरो आग्रह, कोही नाथुराम गोड्से आवश्यक पर्‍यो है, अब यो देश बचाउनका लागि । कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि?’यो कुनै सामान्य व्यक्तिको अभिव्यक्ति होइन ।
आफ्ना धारणा राख्न ६ मिनेटको समय पाएका वैद्यले भने, ‘ओली यसरी आइरहेको छ कि आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ । यो समयमा खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है । त्यसैले मेरो आग्रह, कोही नाथुराम गोड्से आवश्यक पर्यो है अब यो देश बचाउनका लागि ।’ उनले आवश्यक परे आफैँ पनि गोड्से बन्न तयार रहेको बताएका छन् ।
वैद्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिंदा पनि प्रदेशसभामा न कसैले नियमापत्ती जनायो, न त सभामुखले नै रोके । संसदमा आपत्तीजनक वा अमर्यादित अभिव्यक्ति आए रेकर्डबाट हटाउन सभामुखले निर्देशन दिन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीको हत्याको धम्की दिने कांग्रेस सांसदको हो ।कांग्रेस वागमति प्रदेशसभाका सांसद नरोत्तम वैद्यले शुक्रबार प्रदेशसभामा यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।सांसद वैद्य गत निर्वाचनमा काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसद हुन् । काठमाडौं ४ कबाट उनले एमालेका निर्मल कुइकेललाई पराजित गरेका थिए ।प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका उनको चौतर्फी आालोचना भइरहेको छ ।
१९४८ जनवरी ३० मा महात्मा गान्धीको हत्या नाथुराम गोड्सेले गरेका थिए । उनले राजेन्द्र महतोसहितका नेतालाई मन्त्रिपरिषद् समेटेकोमा आपत्ति जनाउँदै मुनुचिया भन्ने देशको उदाहारण प्रस्तुत गरेर आफू गोड्से बन्न तयार रहेको बताएका थिए ।
उनले ओलीलाई अहिले सत्ता चलाइरहेको अवस्थामा छोड्न नहुने र कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार नभए आफू बन्न तयार रहेको बताए ।
एमालेले भष्ट्रचार बिरुद्ध अभियान चलाउने !
काँग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प राप्रपा – कमल थापा
ओली र नेपाललाई चुनौती दिदै भट्टराइले भने, ‘बाहुबली जत्था सडकमा देखाउने काम बन्द गरौं’
माधव नेपाल सहित बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक